सन्नी छोडेर श्रद्दातिर किन इमरान ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
सन्नी छोडेर श्रद्दातिर किन इमरान ?
बलिउडमा किसर हिरोको नाम पाएका अभिनेता इमरान हाशमी बलिउड अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्न स्टार सन्नी लियोनसगँ काम गर्न नमानेपछि भन्ने कुराले यति बेला बलिउड निकै तातेको छ । इमरान हाशमीको अब प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘उंगली’को एउटा खास प्रमोशनल गीतको छायांकन भएको छ ।
यसअघि फिल्म मेकर्सले इमरानको साथमा सनी लियोन लिने फैसला गरेका थिए तर अहिले बजारमा आएको खबर अनुसार इमरान उक्त फैसलाको सहमतमा थिएनन् । इमरानले सनी सगँ काम गर्नमा आपत्ति जनाए भने सनी सगँ काम नगर्ने बताएका थिए । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार इमरानले सनी सगँ काम नगर्ने बताए पछि सनीको ठाँउमा श्रद्धा कपूरलाई लिइएको छ ।
प्राप्त खबरका अनुसार उक्त चलचित्रको गीत निकै धमकेदार रहेको बताइएको छ । भर्खरै छायांकन सकिएको चलचित्र उंगलीको धमकेदार गीत केहि दिनमा नै रिलिज हुने भएको छ । धर्मा प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र उंगली २८ नोबेम्बरमा रिलिज हुदैंछ ।